SIDDEED QOF OO KU DHINTAY ROOBKII GALABTA KA DA’AY MAGAALADDA HARGAYSA IYO GUDDOOMIYAHA DEGMADDA AXMED DHAGAX OO KA WARBIXIYAY |
SIDDEED QOF OO KU DHINTAY ROOBKII GALABTA KA DA’AY MAGAALADDA HARGAYSA IYO GUDDOOMIYAHA DEGMADDA AXMED DHAGAX OO KA WARBIXIYAY
Hargaysa(GNN):-Ugu yarraan Siddeed qof ayaa la sheegay inay ku geeriyooddeen Roob dabaylo wata oo galabta ka da’ay Caasimadda Hargaysa ee xarunta jamhuuriyadda Somaliland, waxaanna jirta tiro kale oo dhaawacyo soo gaadheen, kadib markii sida la sheegay ay ku soo dumeen Guryo.
Roobkan galabta ka da’ay Caasimadda Hargaysa waxa uu burbur u gaystay Guryo lagu qiyaasay ilaa toddobaatan.
Sidoo kale, waxa qasafka sarre waxa uu ka qaadday Dugsiyo, Cusbitaallo, Meheraddo, waxaannay Daadadkii rogmannaayay jarreen Waddooyin badan oo dhex mara Caasimadda Hargaysa, iyaddoo qaybo ka mida Magaalada Hargaysa caawa laga bakhtiiyay korontaddii u bixi jiirtay, kadib markii uu Roobkii dabaylaha watay uu jaray Xadhkii iyo Tiirarkii Korontadda.
Guddoomiyaha Degmadda Axmed Dhagax Naasir Caydiid Ibraahim oo kormeer ku sameeyay Guryaha iyo Dugisyadda ay waxyeelladu soo gaadhay, waxaannu sheegay in ilaa 100 Guri ay dumeen, isla markaanna uu qaar ka mida Saqafkii sarre ka qaadday.
Guddoomiyaha Degmadda Axmed Dhagax Naasir Caydiid Ibraahim waxa uu sheegay inay ilaa hadda waddaan tiro-koob ay ku samaynayaan goobaha waxyeelladu soo gaadhay, waxaannu sheegay inay jiraan Dugsiyo, goobo Caafimaad iyo Xaafaddo dan-yar ah oo Roob waxyeelo u gaystay.